Agaasimaha ciyaaraha PSG oo ka hadlay wararka la xiriira inay la saxiixanayaan Zidane… (Muxuuse ka yiri mustaqbalka Pochettino?) – Gool FM
(Paris) 26 Nof 2021. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Paris Saint-Germain Leonardo Araújo ayaa beeniyay wararka lagu sheegay warbaahinta ee ku saabsan wada xaajoodka uu la galay tababaraha Faransiiska Zinedine Zidane ee ku saabsan inuu noqdo badelka Mauricio Pochettino.
Wargeyska “Le Parisien” ee ka soo baxa Faransiiska ayaa sheegay in Mauricio Pochettino uusan ku faraxsanayn Paris sababtoo ah qoyskiisa oo ku sugan London, wuxuuna ku fikirayaa inuu ka tago kooxda Paris si uu u tababare ugu noqdo Manchester United.
Wargeyska ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Paris Saint-Germain ay soo dhaweyneyso fikradda bixitaanka Pochettino sababa la xiriira in maamulka kooxda aysan ku qanacsaneyn wax qabadkiisa ilaa hadda, isla markaana ay jiraan wadahadalo horumarsan ee kala dhexeeya Zinedine Zidane.
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Paris Saint-Germain Leonardo Araújo, ayaa xaqiijiyay in wararkaasi aysan ahayn kuwa run ah isaga oo xusay in macalinka reer Argantina uu sii wadi doono kooxda, mana jirto wax la doonayo in shaqada laga ceyriyo, sidoo kale isaguna uusan dooneyn inuu kooxda ka tago.
Haddaba Leonardo oo mar wax laga weydiiyay wada xaajoodka Zidane iyo suurtagalnimada uu Pochettino kaga tagi karo kooxda, ayaa ku jawaabay:
“Pochettino ma uusan weydiisan inuu ka tago Paris Saint-Germain, mana jirto koox nala soo xiriirtay si ay ula saxiixdaan Mauricio.” Ayuu yiri agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Paris Saint-Germain Leonardo Araújo.